Njikọ Ntanetị Ntanetị? Ọ bụ ọkpọkọ ndị ahụ na-ejuputa! | Martech Zone
Njikọ Ntanetị Ntanetị? Ọ bụ ọkpọkọ ndị ahụ na-ejuputa!
Tuesday, July 11, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Senator Ted Stevens, Alaska - Onye isi oche nke Kọmitii Azụmaahịa Senate. Nke a bụ gị gọọmentị na-ekwu maka ịntanetị. Ug. (Mmelite 7/13: Akwa ntụpọ na Gosi kwa ụbọchị)
Enwere otu ụlọ ọrụ ugbu a ị nwere ike ịdebanye aha na ị nwere ike ị nweta ihe nkiri n'ụlọ gị kwa ụbọchị site na ọrụ nnyefe. Dịkwa mma. Ma ugbu a ọ na-abịa n'ụlọ gị, a na-etinye ya na igbe akwụkwọ ozi mgbe ị lara n'ụlọ ma ị gbanwee usoro gị mana ị na-akwụ ụgwọ maka ya, nri.Ma ọrụ a ga-aga ugbu a na ntanetị * na ihe ị na-eme bụ gị dị nnọọ gaa a ebe na ịntanetị na ị ịtụ gị nkiri na maa ihe i nwere ike ịtụ iri n'ime ha nyefere gị na nnyefe ụgwọ bụ n'efu.
Iri n'ime ha na-agagharị na ntanetị ahụ na gịnị na - eme ịntanetị nke aka gị?
Naanị ụbọchị nke ọzọ nwetara, ndị ọrụ m zipụrụ ịntanetị na elekere 10 nke ụtụtụ na Fraịdee na m nwetara ya ụnyaahụ. Ọ bụ maka na ọ gbagwojuru anya na ihe ndị a niile na-aga n'ịntanetị n'ịzụ ahịa. Yabụ ịchọrọ ịkọ maka onye na-azụ ahịa? Ka anyị kwuo maka mụ na gị. Anyị na-eji ịntanetị a ekwukọrịta ma anyị anaghị eji ya maka ebumnuche azụmahịa. Anyị anaghị enweta ihe ọ bụla site na ịga na ịntanetị ahụ. Ugbu a, m na-asị na ị nwere ma ọ bụ na ị chọrọ ịkpa ókè megide ndị ahụ [¿] The usoro iwu obibia bụ ihe ọjọọ. Approachzọ gị bụ usoro iwu n'echiche na ọ na-ekwu "Ọ nweghị onye nwere ike ịgba onye ọ bụla ụgwọ maka ịwakpo ụwa nke ịntanetị". Mba, Emechabeghị m. Achọrọ m ka ndị mmadụ ghọta ọnọdụ m, agaghị m ewe oge dị ukwuu. [¿]
Ha chọrọ ịnyefe ọtụtụ ozi na ịntanetị. Ọzọkwa, ịntanetị abụghị ihe ị ga-atụfu ihe na ya. Ọ bụghị ụgbọala.
Ọ bụ usoro nke tubes.
Ma ọ bụrụ na ị ghọtaghị eriri ndị ahụ nwere ike jupụta ma ọ bụrụ na ha jupụtara, mgbe ị tinyere ozi gị, ọ na-enweta akara na onye ọ bụla ga-etinye ya na tube ahụ ọtụtụ ngwongwo, nnukwu ego ihe onwunwe.
Ugbu a, anyị nwere ntanetị Ngalaba Nchedo dị iche iche ugbu a, ị maara nke ahụ?
Know ma ihe kpatara ya?
Maka na ha aghagh i inye nke ha ozigbo. Ha enweghị ike ibute na ndị ọzọ na-egbu oge.
Ugbu a, echere m na ndị a na-arụ ụka ma ha ga-enwe ike ịhapụ ihe niile ahụ na ịntanetị kwesịrị ịtụle ma ọ bụrụ na ha ga-emepe usoro n'onwe ha.
Enwere ike enwere ebe maka ụgbụ azụmaahịa mana ọ naghị eji ihe ndị ahịa na-eji kwa ụbọchị.
Ọ naghị eji ọrụ izi ozi dị mkpa maka obere azụmaahịa, na-arụ ọrụ nke ezinụlọ.
Echiche niile bụ na anyị ekwesịghị ịbanye na nke a ruo mgbe mmadụ gosipụtara na enwere ihe emerela nke bụ n'ezie mmebi nke nnọpụiche net nke dakwasịrị mụ na gị.
Tags: ọkpọkọ ịntanetịTechnologyted stevens
Ogige Mashup n'izu a na Mountain View, CA